महिला सम्राटको समुद्री किनारका लागि नयाँ प्रस्तावहरू बेजिया
मारिया vazquez | 21/07/2021 18:00 | मैले के लगाउने?
के तपाईंले आफ्नो बिदामा रमाइलो गरिसक्नुभएको छ वा उनीहरू अझै आउँदैछन्? यदि तपाईंले अहिलेसम्म सुटकेस बन्द गर्नुभएको छैन भने, तपाईं यसलाई केहि नयाँ थप्न सक्नुहुन्छ वुमन'सेरेट बीचको लागि प्रस्ताव। दुबै डु the्गा र सूर्यास्तमा हिड्न दुवैको आनन्द लिनको लागि हल्का र ताजा प्रस्तावहरू।
यसको सामना गरौं, जब हामी छुट्टीमा हुन्छौं हामी सँधै टुक्रा प्रयोग गर्छौं, चाहे हामी जति धेरै प्याक भएको छ। ती जससँग हामी धेरै सहज र मनमोहक महसुस गर्दछौं। कपडा, सामान्यतया, सरल वा हंसमुख पैटर्न संग जस्तो की भर्खरको सम्पादकीयमा महिला'सेरेटद्वारा प्रस्तुत गरिएको:
1 दिउँसो पैदल
2 मूलभूत देखि कालो
साँझ झर्छ र तपाईं नयाँ कुनाहरू पत्ता लगाउन वा केवल रमाईलो तापक्रमको आनन्द लिन हिंड्ने कल्पना गर्नुहुन्छ। परिस्थितिहरू जसको लागि महिला'सेरेटले हामीलाई आफैंलाई संयोजन गरेर आरामदायक बनाउन आमन्त्रित गर्दछ सफ्ट कपडाको साथ लुगा फिटिंग कपडा जुन हामी घर भित्र र बाहिर दुबै लिन सक्दछौं।
लामो र छोटो प्यान्ट, कपास टी-शर्ट र मूल क्यामिसोलले यी हेराइहरू पूरा गर्दछ। सादा लुगा र फूल, ताडको रूख र जनावरहरूको साथ बान्की चापलुसी गार्नेट, हरियो र ईक्रु टोनमा। र आउटफिटहरू समाप्त गर्न त्यहाँ सामानहरूको अभाव छैन: फन्ने प्याक, रफिया झोला, फ्लिप फ्लप ...
मूलभूत देखि कालो
कालो र सेतो प्रकाशन घर ब्ल्याक टु बेसिकको नायक हो। यो मिश्रण जुन कहिले पनि विफल हुँदैन विभिन्न शैलीहरूमा प्रस्तुत गरिन्छ मिनी फूल प्रिन्टहरू सुपर चापलूसी, एक रंगको swims सूट र बिकिनी र टी-शर्ट Snoopy को साथ नायकको रूपमा।
समय समयमा हामीले ती क्लासिकहरू लिनु पर्छ जुन हामी सँधै मार्कमा हिर्काउँछौं। को सेतो वा कालो मा swims सूट समुद्री किनारोंका संग्रहबाट शर्टहरू (शर्टहरू, टी-शर्टहरू ...) मिलान गर्दै तिनीहरू समुद्रको किनारमा बिहानको लागि उत्तम विकल्प हुन्छन्। के तपाईं बिकिनीको बढी हुनुहुन्छ? तपाईंले तिनीहरूलाई फेला पार्नुहुनेछ, स्ट्राइप गरिएको प्रिन्ट गरिएको टी-शर्ट वा फूल प्रिन्टको साथ हल्का लुगाहरूको साथ।
के तपाईंलाई महिला'सेरेट बीचको लागि नयाँ प्रस्ताव मनपर्‍यो?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » फेसन » मैले के लगाउने? » नयाँ प्रस्ताव महिला'सक्रेट बीचको लागि